२०७३ मा चलचित्र थोरै सफल, धेरै असफल – Rajdhani Daily
२०७३ मा चलचित्र थोरै सफल, धेरै असफल
नेपालमा २०७३ सालमा १० वैशाखबाट २५ चैतसम्म ८५ वटा नेपाली चलचित्र सार्वजनिक प्रदर्शनमा आए । यो संख्या प्रदर्शनको हिसाबले २०७१ सालको भन्दा कम भए पनि २०७२ सालको भन्दा बढी हो । व्यावसायिक हिसाबले २०७३ साल थोरै सफल धेरै असफल वर्ष बन्यो । तर, केही चलचित्रले व्यावसायिक हिसाबले नेपाली चलचित्रकै सर्वाधिक मुनाफा पनि हासिल ग¥यो ।
यसरी प्रदर्शनमा आएका ८५ वटामध्ये दीपाश्री निरौला निर्देशित चलचित्र ‘छक्कापन्जा’ अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी व्यापार गर्ने चलचित्र साबित भयो । सफल प्रदर्शनीको सय दिनसमेत मनाउन सफल यो चलचित्रले स्वदेशी बजारमा १६ करोडको व्यापार ग¥यो । यो व्यापार अहिलेसम्मकै ठूलो रेकर्ड हो । यो चलचित्रले विदेशमा समेत राम्रो व्यापार ग¥यो । तर, विदेशमा गरेको व्यापारको लेखाजोखा छैन । राम्रो चलचित्र बन्नु, चर्चामा रहेका सफल कलाकार हुनु र प्रचा™प्रसार राम्रो गरिनुले छक्कापन्जा व्यावसायिक रूपमा सफल हुन सकेको हो ।
व्यावसायिक हिसाबले अर्को सर्वाधिक सफल चलचित्रका रूपमा २०७३ मा लुट–२ आयो । यो चलचित्रले स्वदेशी बजारमा ९ करोडसम्मको व्यापार ग¥यो । यो चलचित्र प्रदर्शनीको पहिलो साता भीडभाडका साथ चल्यो । अरू दुई साता सोही अनुपातमा चलेको भए १२ लाखसम्म व्यापार हुन्थ्यो । निर्देशक निश्चल बस्नेतले ‘लुट’ को सफलताको चार वर्षपछि ‘लुट–२’ निर्देशन गरेका हुन् । व्यावसायिक रूपमा लुट–२ अति सफल फिल्म मानियो । तर, कलात्मक हिसाबले लुटजस्तो राम्रो फिल्म लुट–२ लाई मानिएन ।
यस्तै, हेमराज बीसी निर्देशिन चलचित्र ‘गाजलु’ ले राम्रो व्यापार ग¥यो । अनमोल केसीको क्रेजका कारण यो फिल्म बक्स अफिसमा सफल मानियो । गाजलुले लगानीको डेढीसम्म मुनाफा गरेको वितरकहरूको भनाइ रह्यो । यस्तै, अन्तर्राष्टिय बजारमा सफल भएको मीनबहादुर भाम निर्देशित कलात्मक चलचित्र ‘कालो पोथी’ ले नेपालमा राम्रो व्यापार गरेर कलात्मक सिनेमाका दर्शक बढायो । समीक्षकबाट पनि यो चलचित्रले राम्रो प्रतिक्रिया पायो । ऋषि लामिछाने निर्देशित चलचित्र ‘किस्मत–२’ ले पनि लगानी उठाएर केही मुनाफा कमायो । प्रदीप भट्टराईले पहिलोपटक निर्देशन गरेको चलचित्र जात्रा व्यावसायिक रूपमा केही मुनाफा गर्न सफल भयो । जात्रालाई समीक्षकदेखि दर्शकसम्मले राम्रो चलचित्रको दर्जा दिए ।
मिलन चाम्स निर्देशित ‘वीर विक्रम’ औसत सफल फिल्म मानियो । यो फिल्मले स्वदेशी र विदेशी बजारमा गरेर लगानी सुरक्षित ग¥यो । त्यसो त रामबाबु गुरुङ निर्देशित चलचित्र ‘पुरानो डुंगा’ ले पनि रिलिज अघि नै लगानी सुरक्षित ग¥यो । तर, रिलिजपछि यसले दर्शकलाई सन्तुष्टि दिन सकेन । समीक्षकदेखि दर्शकसम्मको टिप्पणी पुरानो डुंगाले खेप्नुप¥यो । ‘चपली हाइट–२’ ले पनि प्रदर्शन अघि नै लगानी सुरक्षित त ग¥यो । तर, यसले ‘चपली हाइट’ को जस्तो चर्चा कमाएन । समीक्षकबाट टिप्पणी खेप्नु परे पनि अभिनेता आयुष्मान देशराजका कारण तन्नेरी दर्शकका लागि चपली हाइट–२ आकर्षक सिनेमा साबित भयो ।
मुकुन्द भट्ट निर्देशित ‘लप्पनछप्पन’, आकाश अधिकारी निर्देशित ‘के म तिम्रो होइन र ?’, उत्कल थापा निर्देशित ‘जंगे’, नीलु डोल्मा शेर्पा निर्देशित ‘हाउ फन्नी’, लक्ष्मण सुवेदी निर्देशित ‘लालजोडी’, रोजा राणा निर्देशित ‘जय पर्शुराम’, हिक्मत विष्ट निर्देशित ‘द विनर’, राजु अधिकारी निर्देशित ‘सुब्बा साब’ जस्ता फिल्म औसत चलचित्र साबित भए ।
मल्टिप्लेक्समा राम्रो व्यापार गरे पनि धेरै लगानीका कारण लप्पन छप्पन र द विनरले लगानी सुरक्षित गर्न सकेनन् । तर, यी दुई चलचित्रले विदेशी दृश्यलाई नेपाली दर्शकमाझ पस्किए । थोरै लगानीका कारण ‘सुब्बा साब’ लगानीसम्म सुरक्षित गर्न सफल भयो । जंगबहादुर राणाको जीवनकथालाई आधुनिकीकरण गरिएको जंगे राम्रो फिल्म बनेर पनि सामान्य घाटामा गयो । काठमाडौंको मल्टिप्लेक्समा चले पनि मोफसलमा नचलेको हाउ फन्नीले केही घाटा सहनुप¥यो । थोरै लगानीको लाल जोडी, सुब्बा साब, मध्यम लगानीको के म तिम्रो हैन र ? सामान्य घाटामा गए । फिल्म राम्रो चलेर पनि लगानी धेरै भएका कारण जय पर्शुरामले राम्रै घाटा सहनुप¥यो ।
अन्तर्राष्टिय महोत्सबमा दर्जन अर्वाड जित्न सफल महँगो बजेटको दीपक रौनियारको फिल्म ‘सेतो सूर्य’ ले नेपाली समीक्षकबाट वाहवाही त पायो । तर, फिल्म हलमा यो फिल्मबाट दर्शक निराश भए । परिणामस्वरूप व्यावसायिक रूपमा सेतो सूर्य असफल भयो । समीक्षकबाट प्रशंसा बटुलेको मनोज पण्डितको फिल्म ‘छाया’ ले पनि दर्शकलाई निराश पा¥यो ।
सेतो सूर्य र छाया दुवै दाताहरूको पैसाबाट बनेका चलचित्र थिए । यी सिनेमा व्यावसायिकभन्दा महोत्सव लक्षित थिए । यस्तै निकै आशा गरिएका ‘दर्पण छाया–२’,
‘होमवर्क’, ‘लभ सासा’, ‘झुम्की’, ‘बाटोमुनिको फुल–२’, ‘तीन घुम्ती’, ‘निभ्न लागेको दियो’, ‘किङ’ जस्ता सिनेमाहरूले पनि दर्शकलाई निराश तुल्याए । जसमध्ये नरेश केसीको निम्न लागेको दियोलाई समीक्षकले राम्रो भने व्यावसायिक रूपमा पूर्ण असफल कहलियो ।
तुलसी घिमिरेको ‘दर्पण छाया–२, सुवर्ण थापा निर्देशत बाटोमुनिको फूल–२ जस्ता फिल्म सिक्वेल भएर पनि व्यावसायिक असफल साबित भए । यी फिल्मको अर्ती–उपदेशलाई दर्शकले पचाएनन् ।
अपिल विष्टको झुम्की दर्शकका लागि हेर्नैैपर्ने फिल्म बन्न सकेन । प्रचण्डमान श्रेष्ठको लभ सासा समीक्षकबाट प्रशंसित भए पनि दर्शकको प्रिय बन्न सकेन । बाबुराम ढकाल निर्देशित चलचित्र तीन घुम्तीले विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको उपन्यास तीन घुम्तीको साख नै गिराइदियो । उपन्यास पढ्दा दर्शकले जुन आनन्द पाउने गरेका छन्, तीन घुम्तीलाई दृश्यचित्रमा हेर्दा दर्शक निराश भए ।
आशिष भेटवाल निर्देशन जंगबहादुरको कोट, नवीन अवाले निर्देशित ‘बिजुली मेसिन’, सुरज भुसाल निर्देशित ‘ठाँगो’, श्रीराम दाहाल निर्देशित ‘लुकामारी’ जस्ता सिनेमामा केही प्रयोग त देख्न पाइयो । तर, यी फिल्महरू पूर्ण असफल साबित भए । व्यावसायिक हिसाबले निर्मातालाई यी चलचित्रले डुबाए ।
घिनलाग्दो नग्नताले दर्शक तान्न सकिन्छ भन्ने मनशायले ‘छेस्को’, ‘जिस्म’ जस्ता चलचित्र पनि २०७३ मा बनाइए । अश्लील साइटहरूमा समेत रुचाउन छाडिएकी अर्चना पनेरूजस्ता पात्रलाई खेलाएर बनाइएका यी फिल्मलाई दर्शकले अस्वीकार गरे । फलतः यी फिल्म नेपाली चलचित्र वृत्तका लागि धब्बा साबित भए ।
यीबाहेक अरू पाँच दर्जन नेपाली सिनेमा हलमा २०७३ मा आए । तर, ती सिनेमा आउनु र जानुको अर्थ रहेन । केवल बनाउनका लागि मात्र बनाइएका ती सिनेमाहरू प्रदर्शनी हुनु र नहुनुमा दर्शकको चासो रहेन । त्यसैले ती फिल्महरू दर्शकका लागि बेकार साबित भए । बजारमा पूर्ण असफल भए ।
कुन कस्तो ?
गाजलु, कालो पोथी, किस्मत–२, जात्रा
चपली हाइट–२, वीर विक्रम, पुरानो डुंगा
लप्पनछप्पन, के म तिम्रो हैन र ?, जंगे, हाउ फन्नी, लाल जोडी, जय पर्शुराम, राधा, द विनर, सुब्बा साब
बाटोमुनिको फूल–२, दर्पण छाया–२, सेतो सूर्य, होमवर्क, लभ सासा, राधा, किङ, झुम्की, लुकामारी, तीन घुम्ती, निभ्न लागेको दियो, सुब्बा साब, नमस्ते नेपाल, निर्भय, पलास, शकुन्तला, ब्रासलेट
जंगबहादुरको कोट, छाया, गाँठो, बिजुली मेसिन, बुद्ध बर्न इन नेपाल, बाजिगर, सुन्तलीलाई भगाइलग्यो झिल्केले, वृन्दावन, शब्द, बिरानो माया, किन गरें माया, म त तिम्रै हुँ, रेलीमाई, संजोग, मेरो देश, प्रतिविम्ब, एक पल, ड्राइभर दाइ, सत्यदीप, सफर, रोप्पा रोग, उहिले बाजेको पालामा, आवारा, २१ वर्ष, उमंग, द फेमस, मेन्टल, भाग्य आ–आफ्नो, परिणाम, रामजाने, लेक साइड, यो साइनो मायाको, अपरिचित, तँ म र उ, पार्सल, कम्पन, रिलेसन, अनमोल क्षण, लाले, सूर्या द पावर, छेस्को, जिस्म, ज्यानमारा, तिमीविना, प्रेमी, समर्पण, भ्रम, नेटवर्क, मंगोलियन हार्ट, यु टर्न, चक्र ।
(सर्वाधिक सफल – लगानीको चौबर वा सोभन्दा बढी उठाएको, सफल– लगानी उठाएर केही मुनाफा गर्न सफल, औसत सफल– लगानी सुरक्षित गर्न सफल भएको, औसत– सामान्य घाटा खाएको, औसत असफल– लगानीको आधासम्म उठाएको, सर्वाधिक असफल– व्यावसायिक रूपमा पूर्ण असफल भएको)